Uluntu | Ukusuka kwiLinux
Uluntu lwesoftware yasimahla lwenziwe ngabasebenzisi besoftware yasimahla kunye nabaphuhlisi, kunye nabaxhasi bentshukumo yesoftware yasimahla. Oku kulandelayo luluhlu (olungaphelelanga) lolu luntu kunye nemibutho ephambili eyenzayo.
1.3 Isiseko seVía Libre
1.8 EMozilla Argentina
1.9 IPython Argentina (PyAr)
2.1 I-GNU eSpain
2.4 Ubuntu eSpain
2.5 Amaqela abasebenzisi beLinux (Spain)
3.1 I-GNU Mexico
3.2 IMozilla eMexico
3.4 Amaqela abasebenzisi beLinux-Mexico
4.1 I-Associação SoftwareLivre.org (i-ASL)
5.1 IParaguay Linux Iqela lomsebenzisi
6.2 Iqela lomsebenzisi weLinux-Uruguay
7.2 Iqela lomsebenzisi lasePeru Linux
8.1 I-GNU yaseChile
8.2 Ubuntu eChile
8.3 IMozilla Chile
8.4 Amaqela abasebenzisi beLinux-eChile
8.5 Olunye uluntu
10.2 Iqela lomsebenzisi leLinux -Ecuador
12 EMntla Merika
12.2 Amaqela abasebenzisi beLinux-kuMbindi Merika
I-USLA imele "Abasebenzisi beSoftware yasimahla yaseArgentina". Kunokuthiwa "ngunina" wayo yonke imibutho yeSoftware yasimahla eArgentina. Izisa amaqela aSoftware asimahla kunye nemibutho eyahlukeneyo, phakathi kwazo zonke ezo zichazwe ngezantsi.
Amanye amaqela abasebenzisi:
CaFeLUGAbasebenzisi beLinux yeFederal Capital.
NGOKUQHELEKILEYOIqela labasebenzisi beCordoba Linux.
I-Linux Santa FeIqela lomsebenzisi weLinux eSanta Fe.
LUGNA: Iqela labasebenzisi beLinux eNeuquén.
i-gulBAC: Iqela labasebenzisi beLinux yeZiko leMveliso ye-Bs.
LUGLiIsoftware yasimahla iqela labasebenzisi beLitoral.
Gugler: Iqela lomsebenzisi le-Entre Ríos.
IiLUGMenIqela leMsebenzisi leSoftware yasimahla ye-Mendoza.
I-LANUXIqela lomsebenzisi leLanús Linux.
I-SOLAR yasimahla yeSoftware yaseArgentina yoMbutho woLuntu yasekwa ngo-2003 ngamalungu enkqubo yasimahla yesoftware e-Argentina. Iinjongo zayo kukukhuthaza ubuchwepheshe, intlalontle, imigaqo yokuziphatha kunye nezopolitiko zesoftware yasimahla kunye nenkcubeko yasimahla, ukudala indawo ebonakalayo yokumelwa kunye nolungelelwaniso lwabantu, uluntu kunye neeprojekthi. Eyona misebenzi yayo iphambili inxulumene nokusasazwa kweSoftware yasimahla kwinqanaba likarhulumente, kwimibutho yezentlalo nakumacandelo ezentlalo ahlelelekileyo.
I-SoLAr isebenzisana ngokubonakalayo namaziko esizwe afana ne-INADI (iZiko leSizwe ngokuchasene noCalucalulo, i-Xenophobia kunye nobuhlanga), i-INTI (iZiko leSizwe leTekhnoloji yezoShishino), i-ASLE (Umda weSoftware yasimahla kuRhulumente), oomasipala neeyunivesithi waseArgentina.
Isiseko seVía Libre
IFundación Vía Libre ngumbutho wabucala ongajonganga kwenza nzuzo owasekwa kwisixeko saseCórdoba, eArgentina, othi ukusukela ngo-2000 ulandele kwaye ukhuthaze iinjongo zesoftware yasimahla kwaye uyisebenzise ekusasazeni ulwazi kunye nenkcubeko simahla. Phakathi kwemisebenzi eyahlukeneyo kukusasazwa kweSoftware yasimahla kwezopolitiko, kwezoshishino, kwezemfundo nakwezentlalo. Omnye wemigca yomsebenzi wayo ulwalamano kunye noonondaba1 kunye nokusasazwa kwezixhobo zokwazisa abantu ngemicimbi ejongene nayo.
YiChannel yaseArgentina yeeNkampani zeSoftware yasimahla. Ngokuchanekileyo liqela leenkampani (iingcali ezizimeleyo –monotributistas ngokuthe ngqo- azibandakanywanga kummiselo weCAdESoL) esekwe kwiRiphabhlikhi yaseArgentina kwaye izimisele kwiinjongo zeCAdESoL nakwimodeli yeshishini lesoftware yasimahla. Ukuba yinxalenye, inkampani kufuneka ivunywe yibhodi yabalawuli.
IGleducar yiprojekhthi yemfundo yasimahla eyavela eArgentina ngo-2002. Ukongeza, ngumbutho waseburhulumenteni osebenza kwicandelo lezemfundo nobuchwepheshe.
IGleducar luluntu oluzimeleyo olwenziwe ngootitshala, abafundi kunye nabaphembeleli bemfundo abadityaniswa ngumdla oqhelekileyo kwimisebenzi edibeneyo, ulwakhiwo lwentsebenziswano lolwazi kunye nokusasazwa kwalo ngokukhululekileyo.
Le projekthi isebenza kwimixholo eyahlukeneyo enjengolwazi olukhululekileyo, imfundo ethandwayo, imfundo ethe tyaba, intsebenziswano yokufunda, itekhnoloji entsha yasimahla kunye nokukhuthaza ukusetyenziswa kwesoftware yasimahla ezikolweni njengemodeli yokufundisa kunye nobuchwephesha, ineyona njongo iphambili yotshintsho kwiparadigm ukuveliswa, ukwakhiwa kunye nokusasazwa komxholo wemfundo.
Yenziwe luluntu oluququzelelekileyo lwemfundo, olwenziwe njenge-NGO (umbutho woluntu) ophendula kwiminqweno nakwiinjongo zoluntu.
I-BuenosAiresLibre, ekwabizwa ngokuba yi-BAL, liqela elizinikele ekuphuhliseni nasekulondolozeni uthungelwano loluntu lwedijithali eBuenos Aires (eArgentina) nakwimimandla elijikelezileyo isebenzisa itekhnoloji engenazingcingo (802.11b / g). Ineendawo ezingaphezu kwama-500 zokudibanisa ulwazi ngesantya esiphezulu.
Injongo yeBuenosAiresLibre kukucwangciswa kwenethiwekhi yedatha, yasimahla kunye noluntu kwiSixeko saseBuenos Aires nakwimimandla esijikelezileyo njengendawo yasimahla yokubonelela ngomxholo, phakathi kwezinye izicelo zoluntu. Phakathi kwezinye izinto, inethiwekhi ibandakanya iWikipedia kwiSpanish. Ukwandiswa kwenethiwekhi kuncediswa kukusasazwa kunye nemisebenzi yoqeqesho, apho bafundisa khona ukudibanisa i-eriyali ngezinto ezenziwe ngokwazo. IBuenosAiresLibre iphuhlisa le nethiwekhi isebenzisa usetyenziso lwesoftware yasimahla
Yasekwa ngo-1. NgoSeptemba 2007, i-Wikimedia Argentina yisahluko sendawo seWikimedia Foundation. Usebenza ekusasazeni, ekukhuthazeni nasekuphuhliseni izixhobo zenkcubeko simahla, ngakumbi ekusasazeni iiprojekthi ezinxulumene ne-Wikimedia ezinje ngeWikipedia, iWikimedia Commons, iWikinews, phakathi kwabanye. Ngo-2009, yayiliqela elalinoxanduva lokunxibelelanisa iWikimanía 2009 eBuenos Aires.
IMozilla Argentina liqela lokusasaza iiprojekthi zeMozilla Foundation eArgentina. Bazinikezele ngokukodwa ekusasazeni ukusetyenziswa kweenkqubo zasimahla eziveliswe yiMozilla ngombutho kunye nokuthatha inxaxheba kwiminyhadala eyahlukeneyo.
IPython Argentina (PyAr)
IPython Argentina liqela labaxhasi kunye nabaphuhlisi bolwimi lwenkqubo yePython eArgentina. Imisebenzi yakhe ibandakanya ukusasazwa ngeentetho kunye neenkomfa, kunye nophuhliso lweeprojekthi ezisekwe kwiPython kunye nePyGame okanye iCDPedia, inguqulelo yeWikipedia ngesiSpanish kwiDVD.
I-Uuntu-ar liqela labasebenzisi baka-Ubuntu, elizinze eArgentina, elizinikele ekutshintshisaneni ngamava nokwabelana ngolwazi ngale nkqubo.
Injongo yakhe kukusasaza izibonelelo zoBuntu kwimozulu yokuthatha inxaxheba, apho izimvo zabo bonke abasebenzisi zamkelekile ukuphucula le nkqubo intle yokusebenza. Kwindawo yabo uya kufumana izixhobo eziyimfuneko zokuqalisa ku-Ubuntu, ukusombulula iingxaki okanye ukutshintshiselana ngezimvo.
Uluntu lwaseGNU eSpain. Apho uyakufumana ubutyebi bolwazi malunga neProjekthi ye-GNU kunye nentshukumo yesoftware yasimahla: iilayisensi, apho unokufumana kunye nokukhuphela isoftware yeGNU, amaxwebhu, ifilosofi, iindaba kunye noluntu.
Eyona njongo iphambili yoMbutho weSizwe weeNkampani zeSoftware zasimahla i-ASOLIF (Imibutho yeFederal Software Software) kukukhusela kunye nokukhuthaza umdla kwimibutho yeshishini lesoftware yasimahla kwiTekhnoloji kunye neemarike zeenkonzo, ngokuvelisa kunye / okanye ngenkxaso iiprojekthi, kunye nokulungiswa kwamanyathelo okuxhaphaza imodeli yeshishini leSoftware yasimahla, ukufezekisa ubutyebi ngendlela enoxanduva.
Eyasungulwa ekuqaleni kuka-2008, i-ASOLIF namhlanje idibanisa iinkampani ezingaphezu kwe-150 ezisasazwe kwimibutho yesithili esi-8, eyenza ukuba ibe ngumkhokeli ophambili wecandelo lesoftware yasimahla eSpain.
I-CENATIC liZiko loLuntu likaRhulumente, elikhuthazwe nguMphathiswa Wezamashishini, uKhenketho noRhwebo (ngoBhala wezoNxibelelwano ngoNxibelelwano kunye noMbutho woLwazi kunye nequmrhu loluntu iRed.es) kunye neJunta de Extremadura, ekwanayo IBhodi yeTrasti enabantu abazimeleyo baseAndalusia, Asturias, Aragon, Cantabria, Catalonia, iBalearic Islands, ilizwe laseBasque kunye neXunta de Galicia. Iinkampani iAtos Origin, iTelefonica kunye neGpex zikwayinxalenye yeBhodi yeCENATIC.
I-CENATIC yeyona projekthi icwangcisiweyo kaRhulumente waseSpain yokukhuthaza ulwazi nokusetyenziswa kwesoftware evulelekileyo, kuyo yonke imimandla yoluntu.
Ubizo lweSiseko kukuzibeka njengeziko lokugqwesa kukazwelonke, kunye noqikelelo lwamanye amazwe eYurophu naseLatin America.
Liqela labasebenzisi baka-Ubuntu, elizinze eMexico, elizinikele ekutshintshiseni amava kunye nokwabelana ngolwazi malunga nale nkqubo esekwe kwi-debian GNU / Linux.
Amaqela abasebenzisi beLinux (Spain)
I-AsturLinux: Iqela labasebenzisi beLinux yeAsturian.
I-AUGCYL: Iqela lomsebenzisi leCastilla y Leon.
IBULMA: Abaqalayo Abasebenzisi beLinux eMallorca nakwindawo eziyingqongileyo.
I-GLUGIqela labasebenzisi beLinux yeGalicia.
I-GPUL-CLUGAbasebenzisi beLinux kunye neQela labaCwangcisi-iCoruña yeQela laBasebenzisi beLinux.
I-GUL (UCRM)Iqela lomsebenzisi leYunivesithi yaseCarlos III, eMadrid.
IGULICAbasebenzisi beLinux beCanary Islands.
HispaLinuxUmbutho wabasebenzisi beLinux baseSpain.
IndaLituxIqela labasebenzisi beAlmeria Linux.
Lilo: IiLinuxeros Locos - iYunivesithi yaseAlcalá de Henares.
IXABISOUmbutho wabasebenzisi beLinux yoluntu lwaseValencian.
Uluntu lwaseGNU eMexico. Apho uyakufumana ubutyebi bolwazi malunga neProjekthi ye-GNU kunye nentshukumo yesoftware yasimahla: iilayisensi, apho unokufumana kunye nokukhuphela isoftware yeGNU, amaxwebhu, ifilosofi, iindaba kunye noluntu.
IMozilla Mexico liqela lokusasaza iiprojekthi zeMozilla Foundation eMexico. Bazinikezele ngokukodwa ekusasazeni ukusetyenziswa kweenkqubo zasimahla eziveliswe yiMozilla ngombutho kunye nokuthatha inxaxheba kwiminyhadala eyahlukeneyo.
Liqela labasebenzisi baka-Ubuntu, elizinze eMexico, elizinikele ekutshintshiseni amava kunye nokwabelana ngolwazi malunga nale nkqubo yokusebenza.
Amaqela abasebenzisi beLinux-Mexico
Iqela lomsebenzisi leLinux-Chihuaha (GLUCh)
Iqela lomsebenzisi leLinux-Baja California Sur (GULBCS)
Iqela lomsebenzisi weLinux-Ensenada (ELUG)
I-Associação SoftwareLivre.org (i-ASL)
Idibanisa iiyunivesithi, oosomashishini, urhulumente, amaqela abasebenzisi, imigewu, imibutho engekho phantsi kukarhulumente kunye nabalweli benkululeko yolwazi. Injongo yayo kukukhuthaza ukusetyenziswa kunye nokuphuhliswa kwesoftware yasimahla njengenye inkululeko kwezoqoqosho nakwezobuchwepheshe.
IParaguay Linux Iqela lomsebenzisi
Ineeforamu, uluhlu lweposi, iZipili zeSoftware yasimahla (ukusasazwa kwiiso. Kunye nohlaziyo), ukusingathwa kweeprojekthi zikazwelonke, izipili zamasayithi amaxwebhu (tldp.org, lucas.es), kunye nokulungelelanisa iiLinux InstallFests ezilungiselelwe yimibutho eyahlukeneyo . Ukongeza ine-wiki yeeprojekthi kunye namaxwebhu athunyelwe ngabasebenzisi.
Liqela labasebenzisi baka-Ubuntu, elizinze e-Uruguay, elizinikele ekutshintshaneni ngamava nokwabelana ngolwazi ngale nkqubo yokusebenza.
Iqela lomsebenzisi weLinux-Uruguay
Liqela lase-Uruguay labasebenzisi benkqubo yokusebenza ye-GNU / Linux yeekhompyuter. Ezona njongo ziphambili zeli qela kukusasaza ukusetyenziswa kunye neenjongo zeGNU / Linux kunye neSoftware yasimahla nokuba yindawo yokutshintshiselana kungekuphela ngolwazi lobuchwephesha, kodwa kunye nezimvo kwifilosofi egcina isoftware yasimahla, iKhowudi Umthombo ovulekileyo kunye nezinto ezinje.
Liqela labasebenzisi baka-Ubuntu, elizinze ePeru, elizinikele ekutshintshiseni amava kunye nokwabelana ngolwazi ngale nkqubo yokusebenza.
Iqela lomsebenzisi lasePeru Linux
Iinjongo zeqela kukusasaza inkqubo yokusebenza kweLinux, ukukhuthaza ukusetyenziswa kwayo kunye nokufundisa; kunye nokuxhasa uphuhliso lweOpenSource elizweni.
I-PLUG ayilandeli naziphi na iinjongo zoqoqosho, kodwa isebenzela kuphela uluntu lwaseLinux ePeru. Ukuthatha inxaxheba kwiqela kuvulelekile kubo bonke abantu nakumaziko anomdla wokusebenzisana neenjongo kunye neenjongo zeqela.
Uluntu lwe-GNU Chile. Apho uyakufumana ubutyebi bolwazi malunga neProjekthi ye-GNU kunye nentshukumo yesoftware yasimahla: iilayisensi, apho unokufumana kunye nokukhuphela isoftware yeGNU, amaxwebhu, ifilosofi, iindaba kunye noluntu.
Liqela labasebenzisi baka-Ubuntu, elizinze eChile, elizinikele ekutshintshiseni amava kunye nokwabelana ngolwazi ngale nkqubo yokusebenza.
IMozilla Mexico liqela lokusasaza iiprojekthi zeMozilla Foundation eChile. Bazinikele ngokukodwa ekusasazeni ukusetyenziswa kweenkqubo zasimahla eziveliswe yiMozilla ngombutho kunye nokuthatha inxaxheba kwiminyhadala eyahlukeneyo.
Amaqela abasebenzisi beLinux-eChile
I-AntofaLinux: Abasebenzisi beLinux yeAntofagasta.
UCENTUXIqela labasebenzisi beLinux yeYunivesithi eseMbindini, kwiNgingqi yeNqila.
CDSLIZiko lokuSasaza iSoftware yasimahla, iSantiago.
GULIXIqela labasebenzisi beLinux yeNgingqi ye-IX.
I-GNUAPIqela labasebenzisi beLinux yeYunivesithi yaseArturo Prat, eVictoria.
GULIPM: Abasebenzisi beLinux basePuerto Montt.
I-Distros: I-Debian yaseChile, IArch Chile.
Imeko yedesktop: IGNOME Chile, IKDE eChile.
IQela laBasebenzisi beTekhnoloji yaSimahla (iCuba), eyaziwa ngcono njengeGUTL, luLuntu lwe-OpenSource abathanda kunye neSoftware yasimahla ngokubanzi.
Uluntu lwaseMozilla eCuba. Eyilwe kwaye ikhokelwe ngamalungu eYunivesithi yeComputer Science yaseCuba.
Liqela labasebenzisi baka-Ubuntu, elizinze e-Ecuador, elizinikele ekutshintshiseni amava kunye nokwabelana ngolwazi ngale nkqubo yokusebenza.
Iqela lomsebenzisi leLinux -Ecuador
I-Portal ezinikele ekusasazeni usetyenziso kunye neenjongo ze-GNU / Linux kunye neSoftware yasimahla, kunye nokubonelela ngeenkonzo kunye nolwazi olunxulumene neenkqubo ze-GNU / Linux.
Iqela labasebenzisi be-GNU laseVenezuela liqela elijolise ekunikezeleni nashumayeleni ifilosofi kunye nokuzimisela kweprojekthi ye-GNU kunye ne-FSF (Isiseko seSoftware yasimahla) eVenezuela ngophuhliso, kunye nokusetyenziswa, kweenkqubo, upapasho kunye namaxwebhu asekwe kwisoftware. simahla.
Liqela labasebenzisi baka-Ubuntu, elizinze eVenezuela, elizinikezele ekutshintshiseni amava kunye nokwabelana ngolwazi malunga nale nkqubo esekwe kwi-debian GNU / Linux.
Iqela laseVenezuela labasebenzisi beLinux (VELUG) ngumbutho obonelela ngokufikelela kulwazi olukhulu olunxulumene nenkqubo yokusebenza ye-GNU / Linux kunye neSoftware yasimahla.
Amalungu ethu avelisa izinto ezininzi kuluhlu lwee-imeyile. Yonke imathiriyeli yezobugcisa, isiphumo semibuzo neempendulo ezatshintshiselana ngeVELUG, iyafumaneka kulondolozo lwembali yezintlu zokuposa.
I-Revolutionary Front of Free Technologies (i-FRTL) liqela lamaphiko asekhohlo, elijolise ekusasazeni, ekukhuthazeni nasekusebenziseni itekhnoloji yasimahla kuluntu ngokubanzi, kukhangelo lokwabelana nokukhuthaza ulwazi olukhululayo kunye negalelo kulawulo lobuchwephesha. KwisiCwangciso seKhaya esivela kumbono wobuntu kwicandelo lobusoshiyali benkulungwane ye-XXI.
Indawo yasimahla ye-Software Central America (i-SLCA) yindawo yokuhlangana yamaqela ahlukeneyo asebenzela uphuhliso kunye nokusasazwa kwesoftware yasimahla eBelize, eGuatemala, e-El Salvador, eHonduras, eNicaragua, eCosta Rica nasePanama.
Sihlangene ukuze sinxibelelane, sidibane, sabelane ngolwazi namava; kwaye ngaphezu kwako konke, ukukhuthaza inguqu kuluntu apho inkululeko yesoftware inegalelo ekuveliseni nasekwabelaneni ngolwazi olusa simahla.
Amaqela abasebenzisi beLinux-kuMbindi Merika
Igama GULNIIqela labasebenzisi beLinux eNicaragua
IGULCRIqela labasebenzisi beLinux eCosta Rica
IGUGU: Iqela labasebenzisi beUnix eGuatemala
I-SVLinuxIqela labasebenzisi beLinux e-El Salvador
Isiseko seSoftware yasimahla ngumama WONKE kwimibutho yeSoftware yasimahla kwaye yenziwa nguRichard M. Stallman ukuba axhase kwaye axhase iprojekthi ye-GNU. Okwangoku, ibeka ezandleni zeSoftware yomsebenzisi iinkonzo ezininzi ukuba uluntu luphuhle kwaye lube nemveliso.
Kukho eminye imibutho enxulumene neFree Software Foundation, ekwabelana ngeenjongo ezifanayo kunye nokwenza umsebenzi wazo kwinqanaba lasekhaya okanye kwilizwekazi. Injalo imeko ye Isoftware yasimahla eYurophu, la Isiseko seSoftware yaseLatin America kunye Isoftware yasimahla eIndiya.
Le mibutho yendawo ixhasa iProjekthi ye-GNU ngendlela efanayo neFree Software Foundation eyenzayo.
Ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo osekwe e-USA umsebenzi wawo ophambili kukulungelelanisa uSuku lweNkululeko yeSoftware kwihlabathi liphela. Bonke abasebenzi bavolontiya ngexesha labo.
I-OFSET ngumbutho ongenzi nzuzo onjongo zawo ikukukhuthaza ukuphuculwa kwesoftware yasimahla ejolise kwinkqubo yezemfundo nasekufundiseni ngokubanzi. I-OFSET ibhaliswe eFrance kodwa ngumbutho weenkcubeko ezininzi kunye namalungu avela kwihlabathi liphela.
Ngaba uyazi nawuphi na umbutho obalulekileyo kunye / okanye noluntu olunxulumene nesoftware yasimahla engakhankanywanga? Sithumele eyakho ingcebiso.
Fumana iindaba zamva nje zeLinux kwi-imeyile yakho